Ny zanaka ara-pihetseham-po, inona no tokony hatao
Ahoana no fomba ampianarana ankizy iray hitantana ny fihetseham-pony?
fiofanana, interesnenkoe / From Poster
Ny ankamaroan'ny ankizy dia maneho fihetseham-po am-pitiavana amin'ny zava-mitranga manodidina azy ireo. Nifidy kilalao iray izy ireo - ranomaso, na afaka nilalao taolam-paty izy ireo, ny renim-pianakaviana dia tsy nanome siramamy - fanandramana, naheno zavatra mampihomehy - nihomehy mafy, nahita namana iray - mihazakazaka sy nifamihina. The Mora kokoa ny ankizy iray, mampihetsi-po ny fihetseham-pony izy, sady tsara sy ratsy. Etsy an-danin'izany, ny olon-dehibe mihevitra fa tsy mety ny fihetseham-po toy izany. Ary amin'izao fotoana izao dia miezaka ny hampitony ny zaza isika: mangingina, aza mitabataba, aza mikorontan-tsaina, mijanòna mihodina, sns.
Ary ny ray aman-dreny matetika dia tsy mahafantatra ny fomba hikolokolo tsara ny fihetseham-pon'ilay zaza. Mandroaka ny olona iray hatrany hatrany ny nisamboaravoara lohasahan-driaka rehetra amin'ny zaza, izay miezaka ny hanafina ny fahatezerana sy fahasosorana ary manao mangina fananarana. Maro no matahotra ny hilaza ny ankizy momba ny fahatezerany, ny hatezerana, manenina, fa tsy hanimba azy.
Ny mpitsabo sivika Katerina Murashova dia azonao antoka fa ny fandeferana ny fahatsapan'ny olona dia tsy fomba tsara indrindra ho an'ny ray aman-dreny ihany koa. Ny olona iray dia tsy afaka mahatsapa fihetseham-po fotsiny, fa ny natiora. Ary koa, tsy tokony hatahotra ny fihetseham-po ratsy ary mihevitra azy ireo ho zavatra mahatsiravina. Na izany aza, ny fihetseham-po rehetra dia tokony hianatra hamantatra sy hamaly tsara azy ireo.
Fifehezana hatezerana. Toro-hevitra 6 ho an'ny ray aman-dreny sy zanaka
Amin'izao fotoana izao dia tsy mamaky boky momba ny siansa momba ny psikology aho ary tsy fantatro izay nosoratany. Betsaka ny boky toy izany, ary azo antoka fa misy tsara, mahazatra ary tena ratsy. Saingy amin'izao fotoana izao, mbola mbola taona niainan'ny Sovietika aho, ary nentina tamin'izany fomba izany fa azoko antoka fa tsy hisy ny hadalana be dia be ao amin'ny boky.
Ary ankehitriny aho amin'ny very, fa ny fotoana sy indray hanatona Ahy Neny, ary tena sasany karazana milaza fa izy ireo karazana ara-tsaina boky mamaky teny, raha ray aman-dreny no tsy mampiseho ny ankizy ny ratsy fihetseham-pony, ny, dia ataovy hoe tsy handratra.
Zava-misy tsy dia lehibe loatra ny hoe tokony hamaky ny boky rehetra ny tsirairay. Koa farafaharatsiny vitsivitsy amin'izy ireo?
Ary eto izy, ity renim-pianakaviana manokana ity, miaraka amin'ny heriny rehetra manandrana manatanteraka ny tolo-kevitry ny manam-pahaizana manokana. Ary nandritra ny fotoana kelikely izy, na dia mahazo ny miahotra, ary ny ankizy toa tsy mahatsapa fa ny reniny ankehitriny tezitra, tezitra, malahelo, tezitra, sy ny sisa. Eny, raha ny reny, izay nanao asa toy izany hafahafa dia flegmatic. Ary raha akaiky kokoa ny cholerika?
Eto foana ilay zaza dia mandika ny fandrarana. Ny renim-pianakaviana, mahatsiaro ny famakiana sy ny fiezahana hanaraka ny tolo-kevitr'ireo "psycholojika", dia mitsonika hoe:
"Aza manao an'izany." Matetika aho no mandrara anao. Ary nilaza izy fa mampidi-doza. Miala tsiny fa tsy nihaino ny teniko aho ...
Saingy, mazava ho azy, na oviana na oviana ny fahafaham-po hampihena ny fihetseham-pony dia reraky ny reny rehetra. Misy fipoahana. Ary avy eo ny zaza mahantra dia mahazo iray indray mandeha ary amin'izao fotoana izao, ary mandritra ny fotoana rehetra. Ary mazava ho azy, tena nanohina azy tokoa izany ary namela azy tamim-pitaintainana. Nahoana no efa im-ro roapolo teo ho eo izy no nilaza tamim-pitaka fa hametraka izany zavatra izany, ary ankehitriny dia mitomany toy ny fohy? Inona no niova?
Raha izany tsingerina dia miverimberina hatrany hatrany, manomboka izao tontolo izao mba hijery ny ankizy iray-pihetseham-po sy ny fisehoan-javatra ampoizina mihitsy. Ary mitombo ho azy ny fanahiana, ary ny nahena ny fiainana tanteraka ny asa (ny ankizy matahotra ny manandrana), na, ny mifanohitra amin'izany, ny fanitsakitsahana ny fandrarana fantatra dia lasa mamirapiratra kokoa demonstrative, ary ny fitondran-tena amin'ny ankapobeny - mihantsy. Miankina amin'ny toetrany sy ny tanjaky ny rafi-pitabataban'ny ankizy izany. Nisy olona ao anatin'ny toe-javatra tsy fahazoan-kevitra ny zava-mitranga voajanahary mora kokoa ny handeha niafina, fa ny hafa kosa, tsy afaka hiaritra ny tsy fahazoana antoka, minia "mandeha amin'ny tafio-drivotra."
Izany dia eo an-tanana. Nefa misy hafa.
Manodidina ny fe-potoana mitovy amin'ny etsy ambony (ary indraindray ihany ny olona), ny reniko sy ny dadabeny ary ny renibeko no manatona ahy amin'ny fanontaniana iray:
- Fantatrao, miresaka momba ny fihetseham-po sy ny fahatsapana ara-pihetseham-po izy ireo na aiza na aiza. Lazao, zava-dehibe izany, manana olana amin'ny ankizy ny ankizy ankehitriny, ary tsy maintsy ampianarina izany. Eny, hitantsika fa tsy azony ny fihetseham-pon'ireo olona ary tsy miraharaha azy ireo. Angamba izany ny maha izy azy? Tsy misy? Avy eo ny asperger syndrome? Tsy izany koa? Eny ary, ahoana? Mila mampianatra azy? Izany no olana: ahoana no fomba fampianarana, na aiza na aiza izany dia tena voasoratra. Nividy sary sasantsasany ho an'ny fampahalalana ara-pihetseham-po ara-pihetseham-po isika, noho izany dia misy endri-javatra tsy mahafinaritra nosoratana, tsy te hijery azy ireny izy, ary isika koa, ho marin-toetra. Angamba mety hanome fampiofanana manokana ho antsika na faribolana iray ianao?
Ny toe-javatra roa nofaritako dia lafiny roa amin'io vola madinika io.
Ny fihetseham-po ao amintsika sy ny biby dia zavatra voajanahary. Tsy afaka mahatsapa azy ireo isika. Tokony hampianarina anefa ny famantarana azy ireo sy ny fitsaboana ara-tsosialy.
Ary ny voalohany ara-potoana sy mandritra ny taona maro ny simulateur lehibe amin'ity dingana ity ho an'ny zaza dia ny fihetseham-pon'ireo ray aman-dreniny sy ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviana. Ny ankizy dia mahita azy ireo, mahazo ny anarany, mampifandray azy ireo amin'ny toe-javatra manokana sy ny fitondrantenany manokana, mianatra manaiky azy ireo amin'ny fotoana ary mamaly tsara azy ireo.
Vao maraina, in lehibe ambaratongam-pitondrana ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina, izany fampiofanana nitranga in voajanahary fomba, satria be loatra ny zavatra eo amin'ny fiainana kely "ambany-ambony" ny zaza niankina tamin'ny fihetseham-po toetry ny manodidina zokiolona, ​​sy ny tombontsoany manokana sy filaminana, dia nianatra azy ireo hoe "vakio". Ankehitriny dia tsy mahagaga amin'ity tontolo ity nanomboka nihozongozona.
Inona no tokony ataoko? Mazava ho azy fa mbola mampianatra ihany. Amin'ny fomba ahoana?
Eto amin'ny toe-javatra tena sarotra dia ny ray aman-dreny izay miaiky am-pahatsorana hoe: "Eny, izaho (a) dia mampihorohoro ara-tsosialy (ah). Lavitra avy hatrany dia afaka mamantatra ny fihetseham-poko sy ny hafa aho. Matetika aho no mihetsika fa diso, lasa adala aho. Tsapako inefatra inefatra amin'ny vadiko ny vadiko (vadiko), ary ny rafozan-dreniko (rafozan-dahiko) - tsy misy mihitsy mihitsy. Mandritra ny fotoana rehetra dia toa ahy izy (izy) mamafy ireo demony avy amin'ny tabataba ... "
Eny ary, amin'izany toe-javatra izany, mila miara-mianatra isika.
Tadiavo ny iray.
Misy ny fihetseham-po. Mila mahafantatra izy ireo. Manaova lisitr'ireo fihetsehampo fantatrao. Raha misy latsaky ny lohatenin'ny 25 dia misy zavatra tokony hatao. 40 na mihoatra ny vokatra tsara. Ny lisitra dia azo havaozina eo amin'ny rindrina ho fampahatsiahivana.
Mitazà fihetsehampo avy amin'ny lisitra ao anatinao sy eo amin'izao tontolo izao (tahaka ny Pokemon, tsarovy?) Ary antsoy mafy. Tezitra aho izao. Eto amin'ity sarimihetsika ity, dia kivy izy. Eto dia misy ravin-damosin'ny ravin-tsofina miposaka ao anaty ranomandry iray amin'ny alina mangina - mahafinaritra! Ary dia toy izany koa. Andramo matetika izany eo anatrehan'ny ankizy.
Aza mandry amin'ny fihetseham-po! Raha tezitra kely ianao dia lazao hoe: tezitra kely aho. Raha tezitra ianao, dia asehoy mazava tsara ny fahatezerana, fa tsy manelingelina. Raha tsy miraharaha ny fahadimy ianao amin'ny takelaka hariva, izay nitondra ny zanakao, dia ny tsy firaharahanao no hitany.
Misy ny fihetseham-po, tsy resahina izany. Ny fihetseham-po rehetra vokatr'izany dia azo ekena. Saingy ny gorodona - misy fomba azo ekena sy tsy azo ekena hanehoana ireo fihetseham-po sy fihetseham-po ireo. Ary ny fomba amam-panao azo ekena sy tsy azo ekena dia miankina amin'ny vanim-potoana, toerana, kolontsaina, na dia ny fianakaviana aza. Ny asanao - hamaritana, lazao, asehoy ilay zaza, raha ny marina dia azony. Izay ekena eto dia ekena, izay tsy izany.
Ny ankizy kely kokoa, ny mazava kokoa ny fampiofanana.
Rehefa tezitra ianao dia afaka (fomba azo ekena hampiseho fahatezerana):
- mikiakiaka sy manindrona ny tongotrao,
- handositra any amin'ny efitrano hafa na trano fidiovana,
- atsangano ny kilalaoo,
- Hilaza hoe: tezitra aho, aza mikasika ahy izao.
Tsy afaka (fomba tsy azo ekena):
- Atsipazo ny alika,
- mamely ny zandriny vavy,
- Apetraho eo amin'ny tany ny zavatra ilain'ny ray aman-dreny.
Rehefa tia ankizy sy olon-dehibe tsy mahazatra ianao, dia azonao atao (azo atao ny maneho fangorahana):
- mba hiteny fiderana azy,
- Manolora mba hilalao (ary tsy manizingizina, raha mandà),
- mitandrina zavatra, raha azo atao amin'ny toe-javatra,
- Manolora ny fanampianao (ary aza manizingizina raha vonoina ny fanampiana).
- hanomboka hanohintohina azy amin'ny fiakarany na hianika handohalika,
- ny fangatahana ny hisarika ny sainy ho anao irery ihany na hoe izy irery no nilalao taminao,
- hery, mandresy lahatra azy hihinana na hanao izany na izany.
Mitondra fanamafisana tsara anao eo amin'ny anjaranao amin'ny asa rehetra ataon'ny ankizy ao amin'ny paragrafy efatra.
"Oh, hitako fa ny nenitoanao dia tena nankafy ny fiderana anao momba ny satroka tena mahafinaritra azy."
"Nialanao ny fifandonana tamin'ny zandrinao vavy, ary azoko antoka fa izany no fomba tsara indrindra. Tianay sy ny fianakavianay ny fihetsikao haingana sy mazava. "
Fanamarinana ny fanamafisana ny tsy fahampian-tsakafo, avy amin'ny fomba fijerin'ny algorithm voalaza etsy ambony, fihetsika.
"Ny nenitoa dia tsy nahalala fotsiny hoe aiza no tokony hialanao amin'ny oran-tsoroka, ka menatra be aho."
"Tohina aho - ny zana-nao dia nandroaka an'i Zhuchka, tia azy sy ny tsy manan-tsiny, satria izy, hitanao, dia tsy nomena vatomamy faharoa. Tongava aty amiko, Zhuchenka, hamindra fo aminao aho. Nefa ianao, ry zanako, amin'izao fotoana izao, tsy te-hahita aho. "
Tsy hisy bibikely na fanofanana amin'izany, hisolo toerana ahy, mino ahy.